नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल र एफटीटीएच सेवामा विभिन्न अफर उपलब्ध
01 आज बाह्रसय नेपाली स्वदेश फर्किए
02 थप २५९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि , मृत्यु हुनेको सङख्या ५८ पुग्यो
03 सुनसान गाईजात्रा
04 सामुदायिक वन समावेशी संरचनाको नमूना
05 यातायात कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण नगर्ने
06 लकडाउनबारे विज्ञका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिवद्धत छुः प्रधानमन्त्री
07 राजश्व अधिकृत घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ
08 परीक्षण गराउँदा परिचयपत्र अनिवार्य
09 कार्यालय सञ्चालन गर्न सकस
काठमाडौं, नेपाल टेलिकमले जीएसएम तथा सीडीएमए पोस्टपेड मोबाइल र एफटीटीएचमा विभिन्न अफरहरु उपलब्ध गराएको छ । यी अफरहरु विहीवारदेखि लागू भएको छ ।
एफटीटीएचः फाइबर टु द होम अर्थात एफटीटीएचलाई डाटा र कम्बो प्याक गरी थप ग्राहकमैत्री बनाइएको छ ।
यस अन्तर्गत २० र ५० एमबीपीएसका एक महिना, तीन महिना र १२ महिनाका लागि विभिन्न दरका प्याकहरु उपलब्ध गराइएका छन् ः–
१) २० एमबीपीएसको एक महिनाको प्याक रु. १२००, तीन महिनाको रु. ३६०० र १२ महिनाको रु. १४,४०० मा उपलब्ध हुनेछ ।
२) ५० एमबीपीएसको एक महिनाको प्याक रु. १८००, तीन महिनाको रु. ५४०० र १२ महिनाको रु. २१,६०० मा उपलब्ध हुनेछ ।
१) १५ एमबीपीएसको एक महिनाको प्याक रु. १०००, तीन महिनाको रु. ३,००० र १२ महिनाको रु. १२,००० मा उपलब्ध हुनेछ ।
२) २५ एमबीपीएसको एक महिनाको प्याक रु. १५००, तीन महिनाको रु. ४,५०० र १२ महिनाको रु. १८,००० मा उपलब्ध हुनेछ ।
३) यसैगरी ६० एमबीपीएसको एक महिनाको प्याक रु. २०००, तीन महिनाको रु. ६,००० र १२ महिनाको रु. २४,००० मा उपलब्ध हुनेछ ।
१) नेपाल सरकारको निर्णयानुसार यही २०७७ साउन १ देखि लागु हुनेगरी स्वामित्व शुल्कमा परिमार्जन गरिएकोले हाल पोस्टपेड मोबाइलमा पहिलो पटक सिम खरिद गर्दा लागु भइरहेको रु. ५०० स्वामित्व शुल्क अब उप्रान्त नलाग्ने भएको छ । प्रत्येक नयाँ सिमकार्ड र रिचार्ज कार्ड खरिद तथा शुल्क भुक्तानीमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लागु हुनेछ । सो अनुसार हाल नयाँ सिमकार्ड लिनका लागि रु. ९४५ लाग्ने गरेकोमा अब रु. ५०० मा नयाँ पोस्टपेड सिमकार्ड खरिद गर्न सकिने छ ।
२) रु. ५०० मा खरिद गरिने पोस्टपेड मोबाइलमा रु. ४६० क्रेडिट लिमिट रहने छ ।
३) पोस्टपेड मोबाइलमा जुनसकै माध्यम (रिचार्ज कार्ड, एमपोस, बैंक, कम्पनीको काउन्टर, स्मार्ट कार्ड आदि) बाट भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लागु हुनेछ ।
४) पोस्टपेड मोबाइलमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधाहरुलाई अझै ग्राहकमैत्री बनाउनका लागि एक महिना समयावधि भएका विभिन्न नयाँ प्याकहरु बनाइएका छन् । यस अन्तर्गत बेसिक प्याक रु. ३८४, प्रिमियम प्याक रु. ७४९, गोल्ड प्याक रु. ९९९, डायमन्ड प्याक रु. १४९९ र प्लाटिनम प्याक रु. २४९९ मा खरिद गर्न सकिन्छ ।
यी प्याकहरु ‘नेपाल टेलिकम एपु प्रयोग गरेर तथा ८ज्ञद्धज्ञछ३ डायल गरेर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छन् । पहिलोपटक कम्पनीको एप प्रयोग गर्दा १०० एमबी डाटा निःशुल्कः उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट धधध।लतअ।लभत।लउ मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।